Tilmaame wax ku ool ah oo kaa caawinaya inaad fahamto ganacsiga elektaroonigga ah, si fudud ugu dhisto ganacsigaaga, iyo inaad ku guuleysato guul waarta
Tababarkan waxaa inta badan loogu talagalay:
- shaqaalaha raba inay kordhiyaan xirfadahooda, shaqadooda ilaashadaan ama kasbadaan dakhli dheeri ah;
- ardayda doonaya inay shaqo helaan;
- dadka horey u bilaabay ganacsigooda internetka laakiin u halgamaya sidii ay u guuleysan lahaayeen.
Sidee loo bilaabaa ganacsi khadka tooska ah lagu sameeyaa oo lagu kasbadaa? Oktoobar 15th, 2021Tranquillus
READ Tababbarka shaqaalaha, bilowga cusboonaysiinta xirfadeed
horeHagahayaga hordhaca ah ee luqadda Jabbaan
socdaHAGAHA MUHIIMKA AH EE AQOONSIGA [XEER LA'AAN]